० तपाई प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ?
— मैले नेपालको प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई सद्भाव भ्रमणको रूपमा लिएको छु । केही समय अगाडि भारत र नेपालको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री स्वयमले नियालेर एउटा नयाँ आयामको सुरूवात समेत गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालमा आएर आफ्नो अभिव्यक्तिबाट एउटा आशा जगाएको छ । त्यसले नेपाल भारतको सम्बन्धमा उत्साहको माहोल सिर्जना गरेको थियो । नेपालको संविधान निर्माणदेखि लिएर महाभूकम्पसम्म सहयोग र तिक्तता पनि बराबर रूपमा अगाडि बढेको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको त्यो बेलाको अभिव्यक्तिबाट आएको जुन प्रकारको आशातित कुरा आयो त्यसको आवश्यकता सबैले महशुस गरेको हो । त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमणमा जानु भएको छ । अब के हुन्छ कसो हुन्छ, त्यो सबै हेर्न बाँकी रहेको छ । मलाई लाग्छ दुबै देशको बीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु एकदमै अपरिहार्य रहेको छ ।
० प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई सफल र प्रभाकारी बनाउन नेपालको कस्तो भूमिका हुनु पर्छ ?
— सरकारी संयन्त्र र परराष्ट्र मन्त्रालय, व्यक्तिहरू, संसद लगायतकाले विभिन्न समस्या र कहाँ के कस्तो कमजोरीहरू लगागतका कुन कन विषयमा कुरा गर्ने हो सबै कुरामा छलफल गरिएको छ । कुन विषयलाई उठाउने हो भनेर प्रधानमन्त्री आफैले पनि विभिन्न निकायहरूसँग विचार विमर्श गर्नु भएको हो । भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा उहाँले दिएको अभिव्यक्तिबाट के प्रष्ट भएको छ भने अहिले तराई मधेशमा बाढीको समस्यादेखि लिएर यस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याहरूलाई भ्रमणको क्रममा राख्ने भनेर प्रष्ट पारेका छन् । दुई देशको सम्बन्धलाई सुधारोन्मुख दिशातिर डोर्याउने भन्ने कुराको जानकारी गराएको थियो । नेपाल भारतबीच विभिन्न प्रकारको सन्धि सम्झौताहरू विभिन्न कालखण्डमा भएको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेदेखि लिएर अन्य व्यक्तिहरूले दिएको सुझाव बाहिर आएको छ । त्यसले गर्दा खेरी सबै तहमा सुधारोन्मुखतिर काम गर्ने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि जनाएको थियो । पुरानो सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकनदेखि लिएर जलस्रोतको विषयमा त्यसलाई अध्यावधिक गर्ने विषयलाई लिएर अहिले भएको बाढीको समस्या, सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या, भारतको बाँधले नेपालको तराई मधेशमा निम्ताएको समस्या इत्यादीलाई भ्रमणको क्रममा विषयवस्तु बनाउँदा यस भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
० अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्री देउवा सहितको टोलीको भ्रमणलाई तपाई कतिको सान्दर्भिक देख्नु भएको छ ?
— म त यसलाई समय सान्दर्भिक नै मान्छु । किनभने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आएर दिएको अभिव्यक्ति, नेपाल र भारतबीच भएको विभिन्न सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको लागि भारत भ्रमण जानु समय सान्दर्भिक नै हो ।
० अहिलेको भ्रमणमा नेपालले उठाउनु पर्ने मुख्य–मुख्य कुराहरू के–के हुन सक्छ ?
— खासै कुनै त्यस्तो मुख्य कुरा केही होइन जस्तो मलाई लाग्छ । त्यही पुरानो कुराहरू रहेको छ जुन विगतमा भएको थियो । अहिले त्यही कुराहरूलाई नै पुनरावलोकन र अवलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । किनभने भारतले धेरै प्रकारका आशाहरू दिएका छन् । जसमध्ये धेरै पुरा भइसकेको छ भने केही सुरू भएर सम्पन्न हुन नसकेका अवस्थामा छ । यी कुराहरूलाई नै प्रधानमन्त्री देउवाले उठाउने विषयहरू हुन् । यसपाली कुनै नयाँ सन्धि र सम्झौता प्रधानमन्त्री ज्यूलाई नगर्न आग्रह पनि गरेका छन् । त्यसैले विगतका कुराहरूलाई नै मुख्य मानेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनको लागि दुबै पक्षबाट काम हुने हो । एउटा समझदारीको नयाँ माहोल बनाउनमा पनि यो भ्रमण सफल होला भन्ने आशा राखेको छु ।
० दिल्लीमा प्रधानमन्त्री देउवा उत्रिने बितिकै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई अप्रयासित भेट गर्नु भयो, कुटनीतिकमा यसले के महत्व राख्छ ?
— यहाँ दुइटा कुराहरू देखियो । पहिले पनि हाम्रो नेतालाई भारतका राज्यमन्त्रीले स्वागत गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अप्रत्यासित रूपमा भेटनु भनेको सम्मान गर्नु भएको हो । जुन रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम बनेको थियो त्यसै वीचमा अप्रत्यासित रूपमा मोदीजीले देउवाजीसँग भेट भयो । त्यसलाई शिष्टाचारको रूपमा हेर्नु पर्छ । यसमा औपचारिकता भन्दा निकटतालाई प्रष्ट पारेको छ ।
० तपाई ईपीजी–समूहको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, नेपालको प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीचको यस्तो भेटवार्तामा के–के विषयमा छलफल गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ? यो भ्रमणलाई दुबै देश चासोका साथ देखिरहेको अवस्था छ यस्तोमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
— विगत दुई तीन वर्षदेखि नेपाल भारतको सम्बन्धमा उतार चढाव देखिएको हो । हाम्रो आन्तरिक मामिलामा पनि भारतले चासो देखाएर बीच–बीचमा कुराहरू आएको हो । महाभूकम्प पछि लगाइएको नाकाबन्दीले पनि धेरै मात्रामा प्रभाव पारिएको हो । विकासको क्रममा भारतीय सहयोग गर्ने, नेपालको विकासमा भारतले आर्थिक लगानी गर्ने जस्ता पनि गहकिला कुराहरू भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदी नेपालमा १७ वर्षपछि आउनुभयो । तर त्यो भन्दा पहिले धेरै प्रधानमन्त्री बन्दा पनि नेपालमा आएका थिएन । यी कारणहरूले नै दुबै देशले यसलाई चासोका साथ देखिएको हो ।
० सन् १९५० को सन्धीको विषयमा दुबै देशबीच गठन भएको प्रवुद्ध व्यक्ति समुहद्वारा परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ, यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषयलाई उठाउनु सान्दर्भिक होला ?
— नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह यी दुबै देशको बीचको सम्बन्ध लगायतका कुराहरूलाई लिएर गठन भएको हो । अहिलेसम्म प्रवुद्ध समूहले चारओटा फैसलाहरू गरिसकेको छ । नेपाल भारतको हरेक विषयमा प्रवेश गरेर छलफल भइरहेको छ ।
० कुन कुन चार ओटा विषयमा छलफल भएको हो ?
— यस्ता विवादित विषयहरूलाई अहिले नै उजागर गर्न मिल्दैन । मिडियामा सम्पूर्ण काम भइसके पछाडी हामी ल्याउने छौंँ । तर हामी चाही कुनै विषयलाई छोडेका छैनौँ । सन्धिदेखि लिएर सीमा र सेना समेतका विषयहरूमा हामी छलफल गरेका छौँ । वर्षौंदेखि भनाभन भइरहेको विषयलाई समाधानको पाटोमा लगिरहेका छौँ ।
० यो भ्रमणले दुबै देश बीचको शताब्दियौँको पुरानो मित्रतामा थप सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
— सकिन्छ, किनकि यो सुधारको खोजीमा भएको हो । यो भ्रमणले सम्बन्धलाई सुधार गर्ने र यसलाई प्रगाढ बनाउने प्रक्रिया हो ।
० विगतमा देखिएको चिसोपना सम्बन्धलाई यो भ्रमणले चिर्न सफल होला ?
— चिसोपना र तिक्ततालाई एकै चोटीमा कहाँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यो सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि निरन्तर रूपमा प्रयास जारी रहनेछ । सुधार भनेको एकैचोटीमा हुने होइन । तर मूलभूत कुरा के हो भने नेपाल भारतको सम्बन्ध एकदमै पुरानो छ । यसमा दीर्घकालीनरूपमा समस्याको समाधान गर्ने निचोड गरेर समबन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सकिन्छ । सबादको प्रक्रियालाई अगाडी बढाई राख्नु पर्छ ।
० अन्त्यमा, यो भ्रमणलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराख्न के–कस्ता कार्यहरू गर्न एकदमै जरूरी छ ?
— बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री जानु भयो । उहाँलाई स्वागत र शिष्टाचार राम्रो भएको छ । शिष्टाचारको पछाडि सदभाव होला भन्ने हामी सबैको आशा र अपेक्षा छ । त्यो भयो भने यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिमा भविष्यमा हुने काममा गतिशिल होला र दुबै देशको सम्बन्धमा थप प्रभावकारी होला भन्ने आशा र विश्वास राखेका छौँ ।